Shumacyada Hadiyada ah ee Hadiyadaha Dabiiciga ah ee La Qaadan Karo oo leh warshad wax soo saarka soy dabiici ah iyo soosaarayaasha | Winby
Warshadaha WINBY & Ganacsiga XADDIDAN
Shumaca Warshadaha Xirfadlayaasha ah 20 sano
maxaad noo Doortaa?
dhalada dhalo caag ah shumacyo udgoon caadadii
matte wax dabiici ah caraf udgoon shumacyo-buluug
shumac muuqaalka carafta leh oo soy ah
Shumaca Dabiiciga ah ee wax loo qurxiyo
dunta shukumaan shukumaan loogu talagalay DIY
Shumaca Wick Trimmer / Wick Dipper / Wick Sigaffer
Shirkadaha waxsoosaarka ee Shumaca Kaniisada - Organic ...
OEM Shiinaha Shumacyada Label Gaarka ah - Dabiiciga Bee wax C ...
Tayo Sare Shumacyo Waara - Ceramics ja ...
Shumacyo Hadiyado ah oo Hadiyad udgoon la qaadan karo oo leh wax soy dabiici ah
100% WAX-Abuur dabiici ah - Waxaa lagu sameeyay 100% wax soy wax saafi ah. Sii nadiifiye, sii gubasho dheer. Si kastoo gubasho ah iyo qiiq madow ma aha, ka caafimaad badan, aan waxyeello u lahayn jirka iyo bey'adda aadanaha. Kaa siin doonaa gubasho nadiif ah iyo saacado badan oo raaxo leh caraf udgoon.
Waxay ku habboon yihiin fasax kasta ama dhacdo gaar ah, sida Maalinta Jacaylka, Maalinta Hooyada, dhalashada, fasaxa, sannad-guurada.
Shumaca udugga ayaa meesha ka saara urka xun iyo urka aan loo baahnayn si wax ku ool ah, hawo hawo nadiif ah ha ahaato. Kufiican walaaca walaaca.
Cabbirka: 6.2cm (Wareeg) * 5 cm (Dherer)
Shumac daasad yar oo soy wax yar oo aan qiiq lahayn ayaa gubanaya
Shumacyadan waxaa lagu shaabadeeyey muuqaal qurux badan, oo kugu habboon inaad ku wareejiso meel kasta oo aad tagtid!
Abuuritaanka jawiga kor u qaada jawiga iyo nasashada adiga iyo martida, ayaa sidoo kale ka dhigaysa hadiyadda ugu habboon munaasabad kasta!
Weelasha shumaca waa kuwo qurux badan, oo ku habboon qurxinta gurigaaga ama ku kaydi waxyaabo yar yar markii la isticmaalay.
Adeeg muunad ayaa la heli karaa.
Waxyaabaha Daasada ayaa + paraffin wax / soy wax ah + cudbi cudbi + daboolka biraha
Cabir 6.2cm (Width) * 5cm (Dherer)
Astaanta Custom sida macaamiisha 'looga baahan yahay
Miisaanka guud 95g
Udgoon Laga soo bilaabo CPL & Symrise. 2%, 3%, 5%, 10% waa la dooran karaa
Isticmaalka Qurxinta guriga ee yoga, ciidaha, hudheelka, arooska, xafladda, spa iyo duugista.
Adeeg Custom / ODM OEM / muunad
MOQ 3000 kumbiyuutar. Amarada yaryar waa la aqbali karaa haddii aan leenahay keyd.
Marka hore, waxaan leenahay shahaadada hoosta heerka Euro. Shumacyadeennu waxay ku habboon yihiin heerka Yurub, markaa uma baahnid inaad ka walwasho tayada shumacyadeena. Wax soo saarkayaga waxaa loo dhoofiyaa daraasiin dalal iyo gobollo ah, sida gobollada Mareykanka, Ruushka, Yurub, Koonfur-bari, iwm, iyaguna si wanaagsan ayey u soo dhoweeyeen macaamiisha dal iyo dibadba.
Second ku saabsan alaabta ceeriin, waxaan u isticmaalnaa wax saliida loo yaqaan 'paraffin wax, soy wax, wax shinida iyo wax kale oo dhirta ah sida wax ceyriin oo shumac ah. Waxyaabaha soyka ah ayaa buuxin kara ilaa 10% saliida lagama maarmaanka ah waxayna soo bandhigaan ur udgoon aad u fiican. Waxyaabaha soyku leeyahay ma laha waxyaabo kiimiko ah lagu daro ama dheeh.
Saddexaad for caraf udgoon, waxaan u isticmaalnaa in ka badan 100 nooc oo ah carafyada la xushay ee shumaca. Alaab keenayaasheena udgoonku waa CPL aromas iyo Firmenich. Dhammaantood waa kuwa ugu sarreeya noocyada alaab-qeybiyeyaasha udgoon ee adduunka. Udugyadan waxaa lagu gaaraa iyadoo la adeegsanayo udugga iyo sidoo kale saliidaha lagama maarmaanka ah, waxayna kaa caawin doonaan inaad abuurto jawi raaxo leh. Wixii udgoon, waxaan kuu soo bandhigi karnaa ur kala duwan sida aad jeceshahay. Haddii aad jeceshahay ur xoog leh, waxaad dooran kartaa 10% saliid shumaca; hadaad jeceshahay ur jilicsan, waxaad dooran kartaa 5% saliid shumaca.
Intaa waxaa sii dheer, waxaan leenahay waaxeena naqshadeynta iyo horumarinta waaxda, waxaanan ku siin karnaa adeegga ODM iyo OEM macaamiisha. Waxaan bixinaa adeeg dhammeystiran laga bilaabo fikradda bilowga ah iyo alaabada ugu dambeysa ee la oggolaaday. Naqshadayaasheena xirfadleyda ah ayaa kaa caawin doona inaad gaarto hadafkaaga.
Hore: Faaruqina Dhalooyinka Shumaca loogu talagalay sameynta shumaca
Xiga: Shumacyada qurxinta leh ee udgoon leh sool leh kristantar keyd ah
Jar Shumac udgoon
Shumacyo udgoon Meeshayda
Shumacyo udgoon oo khadka tooska ah ku socda
Shumac aan udgoon lahayn
Shumac udgoon tayo sare leh
Dhalada dhalaalaya oo shumac shidan shumac dabool leh
suufka suufka ah ee caadada ah shumacyo udgoon
Shumaca muuqaalka udgoon ee qaabka Yankee
shumac hufan shumac udgoon
seddex wick oo udgoon shumac shay dabiici ah
Warsidaha La soco Wixii ku soo kordha
4-E-428, Dooxada Sayniska Awoodda, Lambarka 3088 Lekai North Street, Baoding, Hebei, Shiinaha